Ngaba Ubomi Bam Bunayo Injongo | Buza UThixo
INQAKU ELINGUMXHOLO Ngaba Sifanele Simbuze UThixo?
INQAKU ELINGUMXHOLO Umbuzo 1: Ngaba Ubomi Bam Bunayo Injongo?
INQAKU ELINGUMXHOLO Umbuzo 2: Kuza Kwenzeka Ntoni Xa Ndisifa?
INQAKU ELINGUMXHOLO Umbuzo 3: Kutheni UThixo Endiyeka Ndibandezeleke
LEARN FROM GOD'S WORD Ngaba UThixo Uza Kuzisa Urhulumente Oza Kulawula Ihlabathi Lonke?
KEYS TO FAMILY HAPPINESS Indlela Yokuhlangabezana Namatyala
SONDELA KUTHIXO “Yintoni Ayibizayo Kuwe UYehova?”
OUR READERS ASK Ngaba Ukunqula Kukuzimela Ngesebe Lenkawu?
Izifundo Endizifunda EBhayibhileni
Inkundla YaseYurophu Ixhasa Ilungelo Lomntu Lokungayi Emkhosini Ngenxa Yesazela Sakhe
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwedish IsiTagalog IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu
IMboniselo | Novemba 2012
Umbuzo 1: Ngaba Ubomi Bam Bunayo Injongo?
UROSALIND, owakhulela eNgilani, wayenxanelwe ulwazi, ibe wayefuna ukunceda nabantu. Emva kokuba egqibe isikolo, wafumana umsebenzi owanelisayo wokunceda abantu abangenamakhaya nabaneziphene. Nangona wayenomsebenzi owanelisayo enezinto azifunayo zobomi, uthi, “Kangangeminyaka bendizibuza ukuba, ‘Kutheni silapha?’ kwaye ‘Iyintoni injongo yobomi?’”
Kutheni ebuza lo mbuzo nje?
Abantu abafani nezilwanyana ezingaqiqiyo. Siyakwazi ukufunda kwizinto zexesha elidlulileyo, ukucebela ikamva nokufuna ukwazi injongo yobomi.
Abanye bathi ithini impendulo?
Abantu abaninzi bacinga ukuba eyona njongo yobomi kukuba sisityebi okanye udume ukuze wonwabe.
Ityhila ntoni loo mpendulo?
Sinezinto ezibalulekileyo ebomini bethu. Iminqweno yethu ibaluleke ngaphezu kokuthanda kukaThixo.
Yintoni efundiswa yiBhayibhile?
UKumkani uSolomon wayesisityebi esingawothiyo umlilo nesisukela ulonwabo kodwa wafumanisa ukuba ezo zinto azimenzi onwabe umntu. Wachaza eyona nto imenza onwabe umntu xa wabhala wathi: “Ukuqosheliswa kombandela, emva kokuba yonk’ into iviwe, naku: Yoyika uThixo oyinyaniso uze ugcine imiyalelo yakhe. Kuba oku kuyimbopheleleko yomntu.” (INtshumayeli 12:13) Kubandakanya ntoni ukugcina imithetho kaThixo?
Inxalenye yenjongo kaThixo ngathi kukuba sinandiphe ubomi. USolomon wabhala: “Akukho nto elunge ngakumbi emntwini kunokuba adle, asele aze enze umphefumlo wakhe ubone okulungileyo ngenxa yokusebenza kwakhe nzima. Kwanako oku ndikubonile mna, ukuba oku kuvela esandleni soThixo oyinyaniso.”—INtshumayeli 2:24.
UThixo ufuna sithande size sinyamekele iintsapho zethu. Khawuve ukuba uthini kwilungu ngalinye lentsapho.
“Umfazi makabe nentlonelo enzulu ngendoda yakhe.”—Efese 5:33.
“Bantwana, bathobeleni abazali benu.”—Efese 6:1.
Ukuba siyayisebenzisa le migaqo yeBhayibhile, siyakufumana ulonwabo nolwaneliseko. Eyona nto ibalulekileyo esinokuyenza kukufunda yonke into esinokuyazi ngoMdali wethu size sisondele kuye njengoMhlobo. Eneneni, iBhayibhile iyasimema ukuba ‘sisondele kuThixo.’ Ize yandule yenze esi sithembiso: “Naye uya kusondela kuni.” (Yakobi 4:8) Ukuba uyasamkela esi simemo, ubomi bakho buya kuba nenjongo.
URosalind, ocatshulwe ngaphambilana, uvakalelwa kukuba ngoku uyifumene injongo yobomi. Ungafunda ngento eyatshintsha indlela acinga ngayo kwinqaku elithi “IBhayibhile Iyabutshintsha Ubomi Babantu”.
Wathini UYesu Ngenjongo Yobomi?
UYesu wayeyazi injongo yobomi bakhe, wathi: “Ndizalelwe oku, yaye ndizele oku ehlabathini, ukuze ndiyingqinele inyaniso. Wonk’ ubani ongakwicala lenyaniso uyaliphulaphula ilizwi lam.” (Yohane 18:37) UYesu wachitha ubomi bakhe efundisa abantu inyaniso ngoThixo nangenjongo yakhe.
Ubomi bethu buya kuba nenjongo yokwenene ukuba silandela umzekelo kaYesu, eneneni uyasimema ukuba sifunde kuye. (Mateyu 11:29) Khawukhangele iindlela ezimbini esinokwenza ngazo oku.
UYesu wafundisa ukuba ukuze sonwabe, simele ‘siphaphele intswelo [yethu] yokomoya.’ (Mateyu 5:3) Sinokuyanelisa intswelo yethu yokomoya ukuba singenisa ulwazi ‘ngokuphela koThixo oyinyaniso, nangalowo [amthumileyo], uYesu Kristu.’—Yohane 17:3.
UYesu wayalela abalandeli bakhe ukuba bafundise abanye izinto abazifundileyo. Wathi: “Hambani ke ngoko niye kubenza abafundi abantu beentlanga zonke, nibabhaptiza egameni loYise neloNyana nelomoya oyingcwele, nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endiniyalele zona.”—Mateyu 28:19, 20.
Abo banelisa iintswelo yabo yokomoya ngokufunda iBhayibhile baze baphile ngokuvisisana nezinto abazifundileyo baye bafumanisa ukuba ubomi babo buyaphucuka. Xa beqalisa ukunceda abanye bafunde ngoThixo, baye bafumanise ukuba ubomi babo bunenjongo.
Ukuphila Ngendlela Ekholisa UThixo
Ngaba inokwenzeka into yokuba siphile ubomi akholiswa bubo uYehova. Unokuba ngumhlobo wakhe.
Ngaba Ubomi Bam Bunayo Injongo?
Novemba 2012 | Yintoni Ongathanda Ukuyibuza UThixo?
IMBONISELO Novemba 2012 | Yintoni Ongathanda Ukuyibuza UThixo?